Ị cheburu echiche ịtụgharị ihe omume ntụrụndụ gị ka ọ bụrụ azụmahịa? | Bezzia
Maria onyekwere | 12/01/2022 10:00 | Oge ntụrụndụ
Ọ dịtụla mgbe ị chere maka ịmepụta a azụmahịa gburugburu a ntụrụndụ okike ka ọ bụ nka? Anyị ji n'aka na ọtụtụ n'ime unu ga-echewo maka ya ma emechaa, ụjọ ga-atụ unu na ị ga-amali elu, ànyị ezighị ezi? Taa, ebumnobi anyị bụ ka ị were ya dị ka ohere iji nweta ego site n'ihe na-amasị gị ịme.
Ị dị mma n'ise ihe, ịkwa akwa, ịrụ akpụkpọ anụ, ịkpụzi ite, ịkwa ákwà, ma ọ bụ ịse foto? Arịrịọ ka pụrụ iche na ezi ihe bụ taa a na-ekwu na site na netwọk mmekọrịta nwere ike inyere gị aka ịkpata ihe omume ntụrụndụ gị. Enwere ọtụtụ azụmahịa ndị na-erite uru bụ ndị a mụrụ n'ụzọ dị otú a, ma ọ bụghị naanị ihe gbasara nkà na chioma; n'azụ enwere mgbe a atụmatụ, ọzụzụ na ọrụ. Ị chọrọ ịma igodo iji gbanwee ihe omume ntụrụndụ gị ka ọ bụrụ azụmahịa? Anyị na-ekerịta ha taa
2 Were ya dị ka ọrụ
3 Zụlite ma jụọ
4 Mee ka a mara ọrụ gị
5 Mepụta njikọ na ụzọ ọhụrụ
Ịtụgharị echiche ka ọ bụrụ ohere chọrọ atụmatụ. Y iji wepụta atụmatụ Mmadụ ga-ajụ onwe ya ajụjụ ụfọdụ: Enwere m akụrụngwa kwesịrị ekwesị iji gbanwee ihe omume ntụrụndụ m ka ọ bụrụ azụmahịa? Ọ ga-ekwe omume n'ụzọ akụ na ụba? Kedu ihe m chọrọ ire na onye?
Inwe ụtọ ihe omume ntụrụndụ okike na ibi ndụ site na ya bụ ihe dị iche iche. Iji nweta ndụ site na ya karịa ọrụ ị na-arụ, ị ga-ejide ndị na-ege ntị na gbanwee ihe omume ntụrụndụ gị ka ọ bụrụ ọrụ. Ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ iji gbanwee ihe ntụrụndụ gị na ụwa mgbagwoju anya nke azụmahịa na nke a abụghị ihe a na-enweta n'ime ụbọchị abụọ.
Ịtụle nke a dị mkpa mee atụmatụ Site na mmalite. Atụmatụ nke ga-abụ onye nduzi n'oge nzọụkwụ mbụ, ndị kasị sie ike! na-eburu n'uche mgbe niile na nke a ga-achọ mgbanwe ka ị na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu ihe egwu, buru ụzọ chee echiche maka atụmatụ nke ga-enye gị ohere ịkpata ihe e ji ebi ndụ site n'ịrụ ọrụ nwa oge maka ndị ọzọ na ịrara ọkara nke ọzọ maka ntụrụndụ gị. A ga-enwe oge ịga n'ihu.
Were ya dị ka ọrụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpata ego ị ga-amalite were ihe omume ntụrụndụ gị bụrụ ọrụ. Ya bụ, ị ga-ebu ụzọ na-eme atụmatụ kwa izu dabere ọ bụghị naanị na ọrụ ị ga-ebuga kamakwa n'ọrụ nkwado ndị ahụ nke ịghọ onye ọchụnta ego gụnyere.
Ịmalite azụmahịa site na ihe omume ntụrụndụ anyị na-enwe bụ ihe na-akpali akpali, mana ịnọrọ onwe ya na ịdabere na onwe gị na-ebu usoro ibu ọrụ. Ị ga-achọ oge iji zụọ, ịmepụta, na-emeso ndị ahịa gị na ijikwa akụkụ teknụzụ nke azụmahịa ahụ. Na ee, ihe burukwa ka ị ghara ichefu ihe ọ bụla.
Zụlite ma jụọ
Eleghị anya ị nọrọla ọtụtụ afọ maka ihe omume ntụrụndụ ahụ nke ị na-eche ugbu a ịghọ azụmahịa. Anyị anaghịkwa enwe obi abụọ na ị ga-enwetala ihe ọmụma nke mere ka ị dịkwuo mma, ma ọ bụrụ na ị nweghịkwa. ihe ọmụma njikwa azụmahịa ọ ga-esiri gị ike ịnweta azụmahịa na-aga.
Ọzụzụ dị mkpa. Were usoro mmụta n'ịzụ ahịa na ịzụ ahịa n'ịntanetị, ndekọ ego na ịkparịta ụka n'Ịntanet ka ịmata ka ị ga-esi nweta ihe kacha mma na ha. Na kpọtụrụ ndị ọkachamara na otu ngalaba ma ọ bụ ndị otu azụmahịa ndị nwere ike inye ndụmọdụ na ịkwado gị na ọrụ gị. Gwa ndị ọkachamara ndị ọzọ okwu Na ha amalitela otu ụzọ ahụ ị malitere ọtụtụ afọ gara aga na-enyekarị nghọta. Ma ọ bụ na ha amụtalarị site na mkpebi ọjọọ na ezi mkpebi, mmejọ na ihe ịga nke ọma.
Mee ka a mara ọrụ gị
Taa, inwe ọnụnọ ịntanetị dị mkpa. Netwọk mmekọrịta bụ ihe bụ isi ngwaọrụ iji ruo ebumnuche gị ma ọ bụ ndị na-ege gị ntị. Ma ka ị pụta ìhè n'ime ha ị ga-achọ mepụta ika dị ka ọkachamara, ahịrị eserese nke ndị ọrụ ji ama gị nke na-eme ka ị pụọ iche na asọmpi ahụ.
Na netwọkụ, ọkachasị na Instagram, imewe ika a na-adabara nke ukwuu. Mana ebugola foto ngwaahịa naanị; Ndị ahịa nwere ike ime ọmịiko n'ọrụ gị ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị kwe ka ha chọpụta ka ị na-arụ ọrụ, ngwaọrụ ndị ị na-eji ma ọ bụ ihe sitere n'ike mmụọ nsọ; akụkụ nke onwe gị.
Chee na na mgbakwunye na ịme ego na ngwaahịa ndị ị mepụtara, ị nwere ike ịnye n'ọdịnihu ngwá ọrụ na igodo nke mere na onye ọrụ nwere ike ịmụta ịmepụta onwe ha. Ọ ga-abụ ụzọ isi gbanwee ọrụ gị ozugbo ị jisiri ike mee onwe gị oghere.
Mepụta njikọ na ụzọ ọhụrụ
Ihe ọ bụla ị na-eme, a ga-enwe onye na-ekerịta ọhụụ nka nka. Ịchọta ha na ịmepụta mmekọrịta nwere ike itinye aka na uto azụmahịa gị. Mmekọrịta Ha na profaịlụ ndị ọzọ na netwọkụ yana akwụkwọ ndị pụrụ iche, ha na-abụ ezigbo enyi mgbe niile.
Ọ ga-enyekwara gị aka ịtụgharị mmasị gị ka ọ bụrụ imepụta azụmahịa ụzọ ọhụrụ ma ọ bụ akụrụngwa maka ngwaahịa gị nke na-eme ka ị dị iche na asọmpi ahụ. Mgbe ịmalite azụmahịa ọ bụla, ọ dị mkpa ilekwasị anya na ọdịiche.
Ọ dịtụla mgbe ị tụlere ịtụgharị mmasị gị ka ọ bụrụ azụmaahịa? Gaa elu! Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe na-achọ nnukwu ego mbụ, gbalịa mee ya! Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya nke ukwuu, ị ga-atụ uche ya ọzọ. Na Bezzia anyị na-ekwe nkwa ịgbasa ụfọdụ isi ihe ndị a n'oge na-adịghị anya site na iji ngwa na ozi ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Oge ntụrụndụ » Ị cheburu echiche ịtụgharị ihe omume ntụrụndụ gị ka ọ bụrụ azụmahịa?